Soo dejisan DriverUpdate 5.8.10.33 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: DriverUpdate
DriverUpdate – softiweer si loo baaro loona cusbooneysiyo wadayaasha. DriverUpdate wuxuu taageeraa cusboonaysiinta darawalka ee waxyaabaha kombiyuutarka sida codka iyo kaararka fiidiyowga, alwaaxyada hoosaadyada, kaararka shabakadda, daabacadaha, aaladaha gelinta, iwm. nooca ugu dambeeyay. Software-ka ayaa abuuri kara taakuleyn haddii ay dhacdo xaalad aan laga fileyn ama dhibic soo kabasho ah si uu ugu soo celiyo darawalka xaaladdii ugu horreysay. DriverUpdate wuxuu taageeraa cusboonaysiinta otomaatig ah ee noocyada darawalka waqtiga loo cayimay.
Baadhitaan dhakhso ah oo hufan
Rakibaadda darawallada sida habboon ugu habboon nidaamka hadda jira
Muuqaal faahfaahsan oo ku saabsan macluumaadka darawalka
Beddelka iyo qodobbada soo kabashada
Cusboonaysiinta otomaatiga ee noocyada waqti go’an
Soo dejisan DriverUpdate
Faallo ku saabsan DriverUpdate
DriverUpdate Xirfadaha la xiriira